Mica Kukumbira muRhini uye Plasta Maindasitiri | Lingshou
Mica Chikumbiro muResin uye maPurasitiki Maindasitiri
(1) Kuchinja iyo Optical Properties yePlastics
Mica machipisi anogona kuratidza uye kupenya infrared rays pamwe nekutora uye nhoo UV, nezvimwewo, kana kuwedzera yakakwirira-yakanyorovera pasi mica mumafirimu ekurima, zvichave zvakaoma kuti mwenje ubude mushure mekupinda mukati, nokudaro uchengetedze kupisa kune greenhouse. uye firimu repurasitiki yemunda, etc. Mukushandisa iyi, iyo kuchena uye isina kusimba mamiriro e mica poda yakanyanya kukosha. Kune rumwe ruoko, kusachena kuchaderedza mica yekuvandudza kwayo maitiro, kushandura kuonekera kwayo, kuwedzera huwandu hwemhepo uye kudzora kwechiedza kupinda kweiyo greenhouse. Kune rimwe divi, kana mica isina kunaka muchimiro chisina kugadzikana, saka mhedzisiro yayo yekudzivisa infrared radiation zvakare haina kunaka. Gansu Gelan Chemical Technology Co, Ltd., yeHong Kong Lee Group yakamboshandisa wet pasi mica kugadzira firimu rekurima, chete kuti idhure pachena kwayo ne2%.
Zvinodhaka, zvizorwa, chikafu uye zvimwe zvigadzirwavanoda kuchengetedza radiation, kunyanya ultraviolet radiation, kuvandudza kuchengetedza kwavo kuita. Kugadzira izvi, tinokwanisa kuwedzera zvakakwana flake-yakarongedzwa yakanyoroveswa mica poda mumapurasitiki avo ekutakura zvinhu. Yakakura-saizi mica filler inogona kuvandudza luster yezvigadzirwa (pelescent athari), uye yakanaka mica poda inogona kubvisa luster.
(2) Kuvandudza Yemweya-Kuneta kwePurasitiki
Wet pasi mica poda ine yakaonda yakatetepa sheet chimiro, nehupamhi muanometers uye dhayamita-gobvu zviyero kusvika 80 ~ 120 nguva, nokudaro kuva neyakakura kwazvo inoshanda nzvimbo yekuvharira. Iyo mhepo-kusimba kwemapurasitiki ichawedzera zvinoshamisa mushure mekuwedzera mune yakakwira-yepamusoro uye yakakwirira-yakachena yakanaya mica poda. Mapurasitiki akadaro, zvinoenderana nemabhuku epatent, anogona kushandiswa kugadzira Mabhotoro e-coke, mabhodhoro edoro, mabhodhoro emishonga, zvinyoro-zvekurongedza zvinhu nezvimwewo zvakafanana nemhando dzakasarudzika dzemapurasitiki ekuisa.
(3) Kuvandudza Zvepanyama uye ZveMuchina Nzvimbo dzePastiki
Flaky uye fibrous mafirita anogona kutsigira kushushikana kwezvinhu, izvo zvakafanana nekusimbisa masimbi mukongiri yekrete uye anisotropic zvinhu zvakawanda zvinowedzera zvinhu (epurasitiki, rabara, resin, nezvimwewo). Iyo inowanzo shandiswa iri kabhoni fiber, asi kabhoni fiber inodhura zvakanyanya uye ishoma mu luster, saka, zvakaoma kuiisa mukushandiswa.
Asbestos haina kunyatsoomeserwa mukushandisa kwayo kukonzera cancer. Ultra-yakanaka girazi fiber (semuenzaniso, dhayamita ye1 micron kana mune nanometer level) inotarisana nematambudziko mazhinji mukugadzira uye mutengo wayo zvakare wakakwira. Granular filler, inosanganisira micron quartz poda uye kaolin poda inowanikwa muvhu rakaoma mica haina basa iri sejecha nematombo mukongiri yemendi.Chete kana uchiwedzera filler seinonyoro pasi mica podaiyo yakakwira pakureba-paukobvu ratio, iyo inesimba simba, kukanganisa simba, elastic modulus, mamwe maumbirwo ezvinhu, kugadzikana kwechimiro (sekudziya kupisa dhizaini uye anti-torsion kupera simba kusimuka), uye kurwisa-kupfeka kuita kuchavandudzwa zvikuru.Kwakawanda kudzidza pamusoro peizvi kwakaitwa mune Zvekushandisa Sayenzi. Imwe kiyi saizi yevagadziri.
Plastiki (semuenzaniso, resin) ishoma maererano nehurema ivo pachavo. Mazhinji marudzi emafirita (semuenzaniso, talc poda) akanyanya kuderera musimba ravo remagetsi. Pane kupokana, kuve chimwe chezvinhu zvakagadzirwa negiriniti, mica yakanaka kwazvo mukuomarara uye musimba remuchina. Naizvozvo, nekuwedzera mica poda sosvina mumapurasitiki, iwo maitiro ekuwedzeredza anozove akakura. Nhamba yepamusoro yehurefu-ukobvu ndiyo kiyi yekuwedzerwa kwemhedzisiro yeakakwira-kuchena mica poda.
Iyo yekubatanidza kurapwa kweMica poda ine basa rakakura mune iko iko kunyorera kwayo kunogona kuvandudza zvikuru kutendeseka kwemakemikari kwezvinhu, nekudaro zvinowedzera zvikuru mashandiro ezvigadzirwa. Iyo chaiyo coupling kurapwa zvakare kiyi yekuwedzera midziyo ye mica poda, saka nekushandura iyo crystallization process ye resin. Kushandisa yakakwirira-mica poda kunogona kuita kuti zvigadzirwa zviwedzere kupfuma. Rudzi urwu rwemuchina runoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yepurasitiki, senge mukugadzira zvigadzirwa zvine simba, zvinosanganisira epurasitiki zvikamu zvemashini uye mota, zvigadzirwa zvepasi, ganda rekunze remidziyo yemumba, kurongedza zvinhu, kushandiswa kwemazuva ese, nezvimwe.
(4) Kuvandudza Iyo Inochengetedza Imba yePurasitiki Zvigadzirwa
Mica ine yakanyanyisa mwero wekudzivirira kwemagetsi, saka ndeye yakakwirira-inoshanda yekuisa zvinhu zvinoshandiswa pachayo. Kushandisa mica kuvandudza insulation yezvivakwa hunyanzvi hunozivikanwa. Kugadzira epamusoro mapurasitiki ekufukidza zvigadzirwa, inoshanda filler yakanyorovera mica inogona kuwedzerwa mukati. Sezvakataurwa pamusoro apa, mica yakakwira mune yesimbi yemukati inodzivirirwa kune yayo yakaderera insulation basa. Dry pasi mica haina kushambwa neyangu uye yakakwira mune yesimbi yezvinhu, saka haina kukodzera kushandisa.
Kushandiswa kwenyoro pasi mica mumapurasitiki kwakapfuura ipapo. Kuita zvizere kushandisa zvakasarudzika zvinyoro zve wet wet mica poda, akawanda matsva anokosha zvigadzirwa zvepurasitiki nemashandisi matekiniki anogona kuvandudzwa kunze. Semuenzaniso, nekuwedzera mica poda mumapurasitiki, kudhinda mashandiro uye zviumbwa zvinosanganisirwa zvinosanganisirwa; nekupa SnO2 pamusoro kana nekuisirwa nesimbi, mica poda ichave inorapa uye inogona kushandiswa kugadzira anti-static zvigadzirwa nemapurasitiki anofamba; nekudzvanywa neTiO2, mica ichave iri pearlescent pigment uye inogona kushandiswa mumazhinji maficha; nekuve nemavara, mica ichave yakanakisa ma pigment; mica inogonawo kuvandudza lubrication kuita kwezvakagadzirwa.